Dadka Mareykanka oo u dareeraya goobaha Cod bixinta – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTADadka Mareykanka oo u dareeraya goobaha Cod bixinta
November 6, 2018 Abdirahman Al-cadaala WARARKA MAANTA Comments Off on Dadka Mareykanka oo u dareeraya goobaha Cod bixinta
Xisbiga mucaaradka ee dimuqraadiga ah ayaa rajaynaya inuu dib ula wereego maamulka aqalka wakiilada, halka xisbiga Republican-kana uu doonayo in ay sii xajistaan maamulidda aqalka Senate-ka.
Waxaa la qabtay olole ay Obama iyo Tramp ku kala jiidanayaan Codbixiyeyaasha waxaana laga cabsi qabaa in Doorashadda ay saameeyn ku yeelato Nacayb ka dhan ah muhaajiriinta oo madaxweyne Trump uu ololihiisa ku sheegay
Taageerayaasha madaxweyne Donald Trump iyo kuwa Barack Obama ayaa maalintii Axadda ah isu soo bax ballaaran sameeyay.
“Talaadada ayaad codbixinta u dareereeysaan oo aad codkiina dhiibanaysaan,” ayuu Mr Trump u sheegay taageerayashiia.
Maalmihii ugu dambeeyay Mr Trump ayaa aad uga hadlayay arrimaha socdaalka dalkaasi.
637,400 total views, 3,714 views today
637,400 total views, 3,714 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
637,271 total views, 3,710 views today
637,271 total views, 3,710 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
637,305 total views, 3,712 views today
637,305 total views, 3,712 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
637,362 total views, 3,710 views today
637,362 total views, 3,710 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
637,422 total views, 3,712 views today
637,422 total views, 3,712 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]